ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem]
1 ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 25th May 2010, 1:10 pm
အစ်ကိုတို့ အခုတစ်လော ဂျီမေးလ် ဖွင့်တာ verify ဆိုပြီးတက်တက်လာတယ် ဗျာ....အဲဒါ တစ်ချက်လောက် ဆွေးနွေးကြပါအုံး
2 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 25th May 2010, 5:34 pm
ဘယ်လို verify လဲဆိုတာပြောဦးလေ
ဂျီမေးဖွင့်ရင် ဖုန်း လိုတယ် ဖုန်းကနေ SMS နဲ့ verify ပြန်လုပ်ရတယ် myanmar ph ကို SMS ပို့ခိုင်းလို့မရပါဘူး
ဘယ်လို မျိုးနဲ့ လုပ်ခိုင်းလဲဆိုတာတော့မသိဘူး Random လား IP တစ်ခုကို အကောင့်ဘယ်လောက် တနေ့တာအတွက်လား မပြောတတ်ဘူး ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာ ပြောတာ မှားရင်တော့ ခွင့်လွတ်ကြပါ
3 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 25th May 2010, 7:32 pm
အစ်ကိုတို့ အခုတစ်လော ဂျီမေးလ် ဖွင့်တာ verify ဆိုပြီးတက်တက်လာတယ်
ဗျာ....အဲဒါ တစ်ချက်လောက် ဆွေးနွေးကြပါအုံး
Gmail ဖွင့်တိုင်းတက်တာလားဟင်...မဟုတ်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ်... verify လုပ်ခိုင်းရင်တော့ လုပ်လိုက်ပါ..ဘာကြောင့်လုပ်ခိုင်းတာလဲတော့မသိဘူး..နေ့တိုင်းဖွင့်နေတဲ့အကောင့်တောင်ဖြစ်တယ်ဗျ
verify လုပ်ပီး password အသစ်ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့ အဲဒါဆိုရပါတယ်...
4 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 25th May 2010, 9:06 pm
ဂျီမေး အကောင့်တွေဖောင်းပွလွန်းလို့ ပဲ ကန့် သတ်ထားတာလား မသိ..
ကျနော်လဲ အခုတလော အကောင့်အသစ်လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 4th June 2010, 4:50 pm
အကောင်းဆုံးကတော့ Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်ချင်ရင်
ည 11နာရီ ၀န်းကျင်လောက်ဖွင့်ပေါ့
ပြီးမှ password change လိုက်ပေါ့
တစ်ခါတစ်လေကံကောင်းရင်တော့ မနက် 9နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖွင့်လိုက်ရတတ်တယ်ဗျ
6 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 30th July 2010, 9:15 pm
[You must be registered and logged in to see this image.] အကောင်းဆုံးကတော့ Gmail အကောင့်သစ်ဖွင့်ချင်ရင်
9နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖွင့်လိုက်ရတတ်တယ်ဗျ [You must be registered and logged in to see this image.]
"[ကျေးဇူးပါဘဲ အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်လည်း ဂျီမေး အကောင့်အတွက်နဲ့စိတ်ညစ်နေတာ အခုမှဘဲစိတ်အေးသွားတယ်
7 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 6th August 2010, 8:50 pm
ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာကသူတို့ message လှမ်းပို့ပေးမလို့တောင်းတာပါ... ဒါပေမယ့်နံပါတ်ပေးလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို support မလုပ်နိုင်ပါဘူး..အဲလိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တော့ back ကိုပြန်သွားပြီး ပြန် try တယ် .. အဆင်ပြေပါတယ်...သူကအမြဲတမ်းတော့မဖြစ်ပါဘူး.....(သိသလောက်ပါ)...
8 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 7th August 2010, 12:57 pm
recovery mail ကို ကိုယ့်အရင်ရှိပြီးသား mail ကိုရိုက်ထည့်လိုက်။ အဲ့ဒါဆို ဖုန်းနံပါတ် မတောင်းတော့ဘူး။ ကြိုက်သလောက်ဖွင့်။
9 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 7th August 2010, 8:46 pm
satsoepiang wrote: recovery mail ကို ကိုယ့်အရင်ရှိပြီးသား mail ကိုရိုက်ထည့်လိုက်။ အဲ့ဒါဆို ဖုန်းနံပါတ် မတောင်းတော့ဘူး။ ကြိုက်သလောက်ဖွင့်။
recovery mail နှင့် မဆိုင်ဘူး ထင်တယ် ကို satsoepiang ရေ.... ဘယ်ဟာကြီးပဲ ထည့်ထည့် ဖြစ်တက်ပါတယ်.... Gmail ရဲ့ IP limitation နှင့် ပဲ ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်.....
10 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 9th August 2010, 6:53 pm
ကျွန်တော်ကတော့ Google Chrome နဲ့ Gmail account အသစ်ဖွင့်တာအဆင်ပြေတယ်ဗျ။ ဘယ်အချိန်ဖွင့်ဖွင့်ရတယ်။ Mozilla Firefox နဲ့ဆိုရင် တော့ ဖုန်းနံပါတ်လာတောင်းတယ်။
Google Chrome နဲ့ဖွင့်ကြည့်ပါလား။
11 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 17th September 2010, 5:04 pm
Google Mail account အသစ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်
connection ကောင်းရပါမယ်။ Recovery Email မှာ Span မရှိရပါဘူး။
အဓိကဖြစ်နေတာက ကိုယ်ရဲ့ Recovery Email မှာ Span တွေရှိလို့ တောင်းတာပါ။
ပြီးတော့တတ်နိုင်ရင် cache, history, cookies တွေ ကို အရင်ရှင်းထားပါ။
ပြိးမှ လုပ်ကြည့်ပါ။ ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တော့ အဲဒီလိုမျိုး ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်။
အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်းလုပ်ကြည့်တယ်။ ရတာများပါတယ်။
12 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 18th September 2010, 11:21 am
အခုတစ်လောမှာ Google က မြန်မာနိုင်ငံကိုအကောင့်အသစ်ပေးမလုပ်တော့ဘူးလို့ သတင်းထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အကောင့်အသစ်လုပ်တဲ့ User တွေများလို့ လားတော့မသိဘူး။ Google က မြန်မာနိုင်ငံကို အကောင့်အသစ်လုပ်ဖို့ Banned ထားတယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်ဘော်ဒါ ၁ယောက်ကတော့ G Mail မှာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ မရလို့ ဆိုပြီး yangonmail နဲ့ သုံးနေတယ်ဗျာ့။ အဲဒီ yangonmail ကတော့ free မရဘူးနော်။ သူက ၁နှစ်စာ ကို ၃၀၀၀ ဆိုလားပဲ။
13 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 22nd September 2010, 5:49 pm
အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ဖွင့်ဖွင့် မရဘူးဗျ....
အခု Secondary Mail ပေးလိုက်တာရတယ်....
ပိုသေချာအောင် ကျွန်တော်သိပ်မသုံးဖြစ်တဲ့ Mail ကိုပေးလိုက်တာ...
14 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 22nd May 2011, 11:52 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-05-22
15 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 22nd May 2011, 12:01 pm
ကျွန်တော်တင်တော့ the page you requested is invalid ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်
နောက်တစ်ခါ ထပ်လုပ်လိုက်တော့မှ verification ဆိုပြီးဖုန်းနံပါတ်တောင်းတယ်
16 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem] on 8th June 2011, 7:46 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-06-08
bo bo wrote: အခုတစ်လောမှာ Google က မြန်မာနိုင်ငံကိုအကောင့်အသစ်ပေးမလုပ်တော့ဘူးလို့ သတင်းထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အကောင့်အသစ်လုပ်တဲ့ User တွေများလို့ လားတော့မသိဘူး။ Google က မြန်မာနိုင်ငံကို အကောင့်အသစ်လုပ်ဖို့ Banned ထားတယ်ထင်တာပဲ။ ကျွန်တော်ဘော်ဒါ ၁ယောက်ကတော့ G Mail မှာအကောင့်အသစ်ဖွင့်လို့ မရလို့ ဆိုပြီး yangonmail နဲ့ သုံးနေတယ်ဗျာ့။ အဲဒီ yangonmail ကတော့ free မရဘူးနော်။ သူက ၁နှစ်စာ ကို ၃၀၀၀ ဆိုလားပဲ။
[You must be registered and logged in to see this link.] နဲ့အကောင့်လိုချင်ရင် [You must be registered and logged in to see this link.] ကို နာမည် ၃လုံးလောက်ဘဲပို့ပေးပါ။ gmail မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ gmail မှာဝင်ရင်
[You must be registered and logged in to see this link.] လို့တော့ ရိုက်ရန်လိုပါတယ်။
17 Re: ဂျီမေးလ် အကောင်အသစ်ဇွင့်ကြမယ် (အဆင်မပြေလို့ပါ) [Problem]